Myanmar Font For iOS 8.0,8.0.2,8.1 မှာ အလွယ်ထည့်နည်း (All iPhone & iPad) ~ mgkhainghtoo
Myanmar Font For iOS 8.0,8.0.2,8.1 မှာ အလွယ်ထည့်နည်း (All iPhone & iPad)
21:40 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Myanmar Font For iOS 8.0,8.0.2,8.1 မှာ အလွယ်ထည့်နည်း
အားလုံးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ မြန်မာဖောင့်နဲ့ iOS 8 ပြသနာလေးပါ.
ကျနော် တင်ပေးချင်နေခဲ့တာ တော်တော်လေးကိုကြာခဲ့ပါပြီ၊
ခနခနတော့ အတူနေဘော်ဒါတွေကို လုပ်ပေးနေကြပါ...။
ဒါပေမယ့် Recording လုပ်စရာက ရှိမနေတော့ Videos Tutorial ကောင်းကောင်း
ဒီနေ့တော့ ချစ်အစ်ကိုကြီး Linlin က သူ့ရဲ့ iPhone5မှာ မြန်မာစာ
ပြန်ထည့်ပေးပါဦးဆိုတာနဲ့ Video Tutorial ကိုပါ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ...။
Screenshot ထားတော့ မရှိပါဘူးခင်ဗျား...
ဒါပေမယ့် ဘော်ဒါများအားလုံး အဆင်ပြေအောင်
My Font For All iOS
ttKeyboard For All iOS
Installation Guide for iOS & Myanmar font
၂။ My Font & TTkeyboard နှစ်ခုကို Apple Store မှ ဒေါင်းယူထားပါ။
၃။ My Font icon ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ..Zawgyi One>>>Install>>>
(This Profile is not signed-စာတန်းအောက်မှ-Install-ဆိုတဲ့ စာတန်းအနီလေးကို နှိပ်ပါ..
>>>(Profile installed) ..ရဲ့ဘေး.. Done.. ကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ...။
၄။ Setting>>>General>>>Keyboard>>>Add New Keyboard>>>ttKeyboard>>>Zawygyi ကို On ပေးလိုက်ပါ..ပြီးတော့...Done..ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျား...။
၅။ Search iPhone ကီးဘုတ်နေရာမှာ ကမ္ဘာ့လုံးလေး ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ..
နောက်ထပ် ကမ္ဘာလုံးလေး ပုံကို ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ...
Smart ZawGyi ရဲ့ အောက်မှာ မြန်မာစာလေး ပေါ်နေပါပြီခင်ဗျား...။
အောက်မှာ ကျနော် Video Tutorial လေးကို Youtube ကနေ ကြည်ကြည်လေး
ဗွီဒီယိုလေး မအားတဲ့ကြားက ရိုက်ကူပေးခဲ့တဲ့
ချစ်အစ်ကိုကြီး Linlin အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား..
တောင်းဆိုထားကြတဲ့ ဘော်ဒါများလည်း စိတ်ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့